Latest Myanmar News - Page 68 of 75 - News & Media
April 23, 2020 Latest Myanmar News 0
“ဖုန်း အသုံးပြု သတိပြုရန်နဲ့ ကာကွယ်နိုင်သောနည်းများ” ” အင်တာနက်သုံးခြင်းအတွက် အမြင်အာရုံကောင်းစေရန် ” မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုရာတွင် ဘယ်ဖက်နားကို အသုံးပြုပါ ။ ညာဖက်နားနဲ့ နားထောင်လျှင် မိုဘိုင်းဖုန်းမှ ထွက်ရှိသော ရေဒီယိုလိူင်း( Mobile radiation ) ဦးနှောက်ကို ပို၍ ပျက်စီးစေကြောင်း သိရသည်။ […]
လေးဘက်နာကြောင့် ခြေဆစ်လက်ဆစ်တွေကိုက်နေရင် သပြုသီးနဲ့ ဆား ဆတူ/အချိုးတူ ပြုတ်ပြီး ပေါင်းခံ ချွေးအောင်းပေးလိုက်ပါ။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ အပူအပုပ် ချွေးပုပ်တွေ ထွက်လာပြီးရင် ရေချိုးပေးပါ။ အစားရှောင်စရာ မလိုလောက်အောင် သက်သာပါတယ်။ သပြုသီးကို ငါးခူနှင့်ချက်စားလျှင် ကျောက်ကပ်၊ နှလုံးကောင်းလာပါမည်။ ငါးရံ့ကင်ပြီး သပြုသီးနှင့် ဟင်းချိုချက်စားလျှင် ဆီးချိုရောဂါ သက်သာပါမည်။ […]
၄ဦးထပ်တိုး ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာ (၁၂၇)ဦးရှိလာ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၃-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၇:၀၀)နာရီ ၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) ၏ (၂၂-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညတွင် (ဒုတိယအသုတ်) စစ်ဆေးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၇၂) ခုအနက် (၄) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိ (တွေ့ရှိ) […]
ကွမ်းယာဆိုင်များပါ ပိတ်သိမ်းရန် ညွန်ကြားထားသည့် မကွေးတိုင်း
မကွေးတိုင်းတွင် လမ်းဘေးဖုန်းကဒ်အရောင်းဆိုင်နှင့် ကွမ်းယာဆိုင်များ ပိတ်သိမ်းရန် တိုင်းအစိုးရ ညွန်ကြား ချောက်၊ဧပြီ ၂၂ (Covid-19) ကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်များတွင် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများအတွင်းရှိ လမ်းဘေး၌ Mobile စနစ်ဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိသော Telephone Bonous Card အရောင်းဆိုင်များနှင့် ကွမ်းယာအရောင်းဆိုင်များကို အမြန်ဆုံးပိတ်သိမ်းရန် […]
၂ဦးထပ်တိုး ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာ (၁၂၃)ဦးရှိလာ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၂-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) ၏ (၂၂-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေတွင် (ပထမအသုတ်) စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၈၀) ခုအနက် (၂) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိ (တွေ့ရှိ) […]
ဖုန်းဆက်ပေးပါ မန္တလေးမြို့နယ်အတွင်းရှိမိသားစုဝင်များရှင့် တကယ်လို့များStay Homeကာလအတွင်းစားရေး ၊သောက်ရေးအတွက်အခက်အခဲတစ်ကယ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့(ရွှေမဟာနွယ်)ပရဟိတအသင်းကိုဖုန်းဆက်ပေးပါ။ လူမျိုးမရွေး၊ဘာသာမရွေးဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ ဆန်၊ဆီ၊ဆားအပြည့်အစုံပါတဲ့(၁၀,၀၀၀)တန်အထုတ်ကလေးတွေအိမ်အထိလာလှူပေးပါ့မယ်။ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာပြည်သူတွေကကူညီကြမယ့်*Hello*အစီအစဉ်လေးပါ အစီအစဉ်လေးကတော့ စားရေး၊သောက်ရေးအတွက်တကယ်ခက်ခဲနေပြီဆိုဖုန်းလေးဆက်ပေးဖို့ပါပဲ။ကျွန်မတို့ ကိုယ်တိုင်အိမ်အရောက်လာလှူပေးပါမယ်ရှင့်။ ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအဆင်ပြေတဲ့သူတွေ၊စားနိုင်သောက်နိုင်တဲ့သူများမဆက်ဖို့ တော့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။တကယ်လိုအပ်တာဆိုရင်တော့ဖုန်းလေးတစ်ချက်ပဲဆက်ပေးပါ။ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများအနေနှင့်လည်းတစ်အိမ်ထောင်စုလျှင်(၁၀,၀၀၀)နှုန်းဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းပေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ ရွှေမဟာနွယ်Onlineပရဟ်ိအသင်း 09771177622 Zu Zu Hlaing fb Unicode ဖုနျးဆကျပေးပါ မန်တလေးမွို့နယျအတှငျးရှိမိသားစုဝငျမြားရှငျ့ တကယျလို့မြားStay Homeကာလအတှငျးစားရေး ၊သောကျရေးအတှကျအခကျအခဲတဈကယျရှိခဲ့မယျဆိုရငျကြှနျမတို့(ရှမေဟာနှယျ)ပရဟိတအသငျးကိုဖုနျးဆကျပေးပါ။ […]
နယ်မှ ရန်ကုန်ပြန်လာသူများအား စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် မလုပ်ဆောင်ရ
ပြည်နယ်၊တိုင်းအသီးသီးမှ ရန်ကုန်သို့ ပြန်လာသူများကို စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် မလုပ်ဆောင်ရန် ညွှန်ကြားထား သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်း ပြည်နယ်၊ တိုင်းအသီးသီးသို့ ခရီးသွားရောက်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူများကို စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် မလုပ်ဆောင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်၊ ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများသို့ ဧပြီ ၂၀ ရက်က ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်များတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ […]
စက်ရုံအလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါက ဆက်သွယ်အကူညီတောင်းခံ တိုင်ကြားနိုင်
စက်ရုံအလုပ်ရုံများဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါက ဆက်သွယ်အကူညီတောင်းခံ တိုင်ကြားနိုင်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော် 067 3430145 အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော် 067 3430091 အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော် 067430391 လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အနေပြည်တော် 067 417912 067417944 အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်သမားရေးရာ‌ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အိရွှေစင်ညွန့်0943209608 အမျိုးသားလွတ်တော်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဥက္ကဌ ဦးကျော်ထွေး 095002018 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး […]
သင်သတိမမူမိသော ဆား၏ အံ့ဖွယ် လျှို့ဝှက်ချက်များ
ဆား၏ လက်တွေ့အသုံးဝင်ပုံနည်းလမ်းစုံ ၁) ကြက်ဥတစ်လုံးကျကွဲပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကြက်ဥအနှစ်တစ်ခုလုံးကျနေတယ်ဆိုရင် ဖိတ်ကျနေတဲ့ ကြက်ဥအနှစ်ပေါ်ကို ဆားနှံ့အောင်ဖြူးပေးပါ… ပြီးရင် ခဏစောင့်ပါ…. နည်းနည်းကြာရင် ပေခြင်းပွခြင်းမရှိဘဲ ကြက်ဥအနှစ်တွေကို အမှိုက်ဂေါ်နဲ့ ကော်ပစ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်…. ၂) စွန်းထင်းနေတဲ့ လက်ကိုင်ပုဝါတွေကို မလျှော်ဖွတ်ခင်မှာ ဆားရည်ထဲစိမ်ထားပါ… အစွန်းအထင်းတွေကို ပြောင်စင်စေပါတယ်… ၃) ပန်းကန်စင် […]